ब्यानर न्यूज Archives - Page 42 of 42 - A complete Nepali news portal based on news & views
९ असार २०७४, शुक्रबार १९:३० July 29, 2019 Nonstop Khabar
सानो छँदा छिमेकीको घरमा भरखर जन्मिएको बाछो जिउ सुक्न नपाउँदै आमाको दुध चुस्न गएको देख्दा मलाई अचम्म लागेथ्यो । हैन यो बाछो त जन्मदै के सारो Talented ? – एक्लै बरबराएथेँ । यसलाई दुध खान कसले सिकायो ? मलाई त्यस बाछोको क्रियाकलापप्रति बडो उत्सुकता जागेर आएथ्यो । कस्तो अचम्म, आमाको पेटमा नि सबै कुरा सिकेर […]
९ असार २०७४, शुक्रबार १९:२८ October 30, 2020 Nonstop Khabar
उसले हात हल्लायाे । मैले पनि हल्लाए हात । “बाइ ! नभुल्न नि । सम्झनु म पनि सँगै छु !” उसले बाेलेका यति शब्द मात्र सुन्न पाए मैले । गाडी अगाडि बढिहाल्याे । उसले मेराे यात्राको कामना गर्दै थानकोट नाकामा उदास मुहारका साथ त्यति मात्र भन्याे । बाँकी त उसको मुहारले नै बताइरहेकाे थियाे । उसकाे […]
‘एन इभिनिङ इन लखनउ’
९ असार २०७४, शुक्रबार १९:०३ October 28, 2018 Nonstop Khabar
२०७० सालको कुरा हो । ५२३९ औं श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन । लखनऊको एक साँझ । म धर्मशालाको एउटा कोठामा बसेर पत्रिका पढिरहेको थिएँ । पत्रिकामा एकाग्र भएको मेरो ध्यान तोड्दै बाहिरवाट कुनै नारीको आवाज आयो । मैले ढोका खोले । बाहिर एउटी श्यामवर्णा नवयौवना उभिएकी थिइन । ”अंकलजी मोबाईलका चार्जर होगा ?“ मैले आफ्नो चार्जर […]
९ असार २०७४, शुक्रबार १८:५२ November 12, 2020 Nonstop Khabar
कुरा बर्माको हो । बिहानको समय थियो, वर्षातको सिमसिमे पानीले हल्का भिजेको । कारागारका अग्ला पर्खालहरूमाथि खसेको घामको मधुरो प्रकाश जस्ताको पातलो, पहेँलो पत्रजस्तो देखिन्थ्यो । हामी त्यस श्रापित कालकोठरी बाहिर प्रतिक्षारत थियौँ । दुई लहर बार लगाएका कोठरी बाहिर लहरै खडा भएका थिए- केही झुपडीहरू, जनावर राख्ने साना पिँजडाजस्तै । प्रत्येक कोठरीको लम्बाइ दस […]
२० जेष्ठ २०७४, शनिबार ०७:५५ July 3, 2017 Nonstop Khabar
आज भारतले लगाएको नाकाबन्दिको कारण देशको चौतर्फी जनजिवन चौपट बन्दै गएको छ । नेपालको जारी संविधानमा आनो स्वमित्व दावी गरेर नाकाबन्दिको अस्त्र प्रयोग गर्ने भारतले तराईको क्षेत्रीय दलहरुको साहारालाई नेपाल सम्मको सम्बन्धको आधार बनाएको छ । भर्खर भएको संविधान संसोधनको विषयमा दिइएको भारतको प्रतिकृयाले के देखाउँछ भने नेपालको संविधानलाई अझ थुप्रै विषयमा संसोधन गराउन चाहन्छ […]